Muuri News Network » XOG: A.Madoobe oo Lacag badan ku bixinaya Qorshe ka dhan ah Shariif Xasan.
XOG: A.Madoobe oo Lacag badan ku bixinaya Qorshe ka dhan ah Shariif Xasan.
Dec 24, 2015 - Comments off
Waxaa soo baxaya Warar & Cusub oo sheegaya in Madaxweynaha Maamulka Jubba-land Axmed Madoobe uu qarash fara badan ku bixinayo Kacdoonka Xildhibaanada & Siyaasiyiin Beesha Ogaadeen ee kasocda Gobalka Bakool kaasoo ka dhan ah Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan sheekh Aadan.
Xildhibaan ka tirsan BFS oo kasoo jeeda magaalada Baydhaba ayaa xaqiijiyay in madaxweynaha maamulka Jubbaland uu fangareynaayo arbushaada ay tirro Xildhibaano ah kawadaan Gobolka Bakool, waxa uuna farta ku goday in Axmed Madoobe uu dusha saaran doono mas’uuliyada wixii ka dhaca Gobolka Bakool.
Xildhibaanka ayaa sheegay inay la socdaan dhaqdhaqaaqyada ay Xildhibaanada Ogaaden ee ku sugan deegaanada Yeed,aato iyo Ceel-Barde ay wadaan, waxa uuna cadeeyay in Axmed Madoobe uu isaga shalaay ku danbeyn doono, sida uu hadalka u dhigay.